DALAGYADA SILAGE EE UGU SARREEYA IYO DIYAARINTA QUUDINTA - BARADHADA
Ugu Weyn Ee Baradhada
Kaluumaysigu waa nidaam isku dhafan oo miro-dhaf ah iyo habdhaqameedka biochemical si loo ilaaliyo tiro ballaaran. Silage waxaa lagu heli karaa halsano, taas oo ah, waa clamada aan lahayn oksijiin. Tani waa habka ugu caansan ee soo iibsiga. Isticmaal cagaar cagaaran oo dhir leh oo ku haboon abuurista quudinta xoolaha iyo digaaga. Codso gabbaldayaha, hadhuudhka, baradhada barafka, xididdada iyo kuwa kale. Silo waxaa looga baahan yahay beeraha hal sabab oo fudud - waxay ka kooban tahay nafaqooyin badan iyo guryaha cuntada. Waa cunto qiimo leh xayawaanka. Silajku wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka, kaas oo ka caawiya xoolaha iyo digaagga dheefshiidka. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sidii aad u samayn lahayd silo guriga.
Silage-ka waxa uu leeyahay xoog saarida tamarta isdhaafsiga, taas oo gaartay 12 MJ halkii 1 kg. Waxay yareyneysaa culeyska jirka xoolaha iyo digaagga iyada oo aan la dhimin qiimaha nafaqada ee cuntada. Kombiyuutarka korniinku wuxuu leeyahay dheef-shiid kiimikaad hooseeya (37%). Badankood ma kala qaybsamaan xayawaanka xayawaanka ah ee ammonia, laakiin waxay ku jajabaan xiidmaha qaabka asaasiga ah ee amino. Sidaas oo kale waa istaandarka. Cunto-mareenka ayaa si buuxda u nuujinaya xoolaha iyo digaaga, wuxuuna kordhiyaa heerarka gulukoosta. Taas awgeed, heerka waxsoosaarka caanaha ee lo'da ayaa koraya, iyo xayawaanka yaryar waxay kor u qaadaan miisaanka si ka fiican oo dhakhso badan. Sidoo kale, istaarijka wuxuu saameyn ku yeeshay hab-dhaqameedka dheef-shiid kiimikaadka.
Nasiib darro, silage hadhuudhku wuxuu leeyahay qiime nafaqo oo hooseeya, suntan xad-dhaaf ah iyo waxyeelo kale. Xaqiiqadu maaha mid ku habboon quudinta lo'da uurka leh, sababtoo ah carotene looma jeedo fitamiin A.
Waa muhiim! Cunto ka timi astaamaha dabiiciga ahi waxay si xun u saameeyaan awoodda dhalidda cunugga.
Wixii diyaarinta qashinka hadhuudhka ah ee marxaladda of bislaalka ee hadhuudhka. Waxaa lagu jajabiyaa 5 mm. Qayb ka mid ah hadhuudhku waa inuusan ka badnaan 5%.
Haddii silo si fiican loo jajabiyey, ka dibna waxa ku jiri doona lactic acid mana jiri doono acid butyric acid. Sonkorta lactic ku badashaa sonkorta waxay ku daraysaa asal organic, iyo silage waxaa lagu nuugay xoolaha iyo digaagga si buuxda. Qaadista qiyaasta la rabo waxay caawineysaa isku-darka isku-darka, laakiin inta badan waxay isticmaalaan habka qayb ka mid ah hadhuudhka kala duwan ee hadhuudhka. Dusha sare, dhulka qoto dheer ama qotodheer qotodheer waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo silfga galleyda. Inta badan waxaa loo isticmaalaa kor-yaal, tan iyo geeddi-socodka soo saaridda quudinta ayaa si fiican u qalabayn. Xaaladdan, suurtagalnimada fatahaad ee dhulka hoose ayaa la dhimay.
Markaad dooranaysid godad, waxaad u baahan tahay inaad tixgelisid cabbirkooda dhererka (aan ka yarayn 3 m) iyo ballac (xulashada tixgelinta tiknoolajiyada ka-saaridda quudinta). Silo waa la qaadaa maalin walba lakab 40 cm ah oo ballaran oo dhan. Si fiican u samee. 10 maalmood ka hor bilowga bilowga silooga, qashinka ayaa u baahan yahay in la nadiifiyo, la nadiifiyo, oo ka sameysan kuwa gudaha iyo lafaha leh.
Cabbitaanka qashinka waa in laga soocaa dabaysha laga bilaabo marka la dhigo kaydinta. Farsamada buuxinta waa in lagu wajahaa joojinta degdegga ah oo dhamaystiran oo la xiriirta qabyo-qoraalka.
Qeybta hoose waxaad u baahan tahay inaad soo saarto lakabka burka cawska (50 cm qaro), ka dibna ka buuxi silo. Cabbirka buug-yaraha waa in si joogta ah loogu dhejiyaa derbiyada.
Silo waa in lagu daboolaa difaac saddex-gees ah. Lakabka kowaad wuxuu yahay filim dhuuban oo foorarsi ah, kan labaadna waa foorno farsamaysan oo cufan leh (waxaa kale oo lagu dabooli karaa shabakad difaac ah si loo ilaaliyo silo laga yaabo in ay uur qaaddo). Saddexaad waa wakiil miisaan culus.
Halsano ee silage ah wuxuu soconayaa ilaa 6 asbuuc, laakiin waxaa fiican in la qabto silage hadhuudh ah ilaa 8 asbuuc, taniyo acetic acid waxaa la sameeyay dhowr jeer toddobaadkan. Tani waxay kordhisaa xasilinta aerobic ee silo.
Waa muhiim! Haddii si loo furo silo kahor, tani waxay keeni doontaa dhibaatooyin aan loo baahnayn oo ah nooca oksijiinta ah.
Ka dib 8 asbuuc oo soo-gaadhis ah, waxaad dooran kartaa silage. Farsamada xulashada saxda ah waa sida soo socota: ka dib marka la baaro, dusha si siman waa inuu ahaado. Xaaladdan, oxygen yar ayaa galaya silo iyo kuleyl la'aantu waxay dhacdaa. Haddii aad u hoggaansanto dhamaan sharciyada kor ku xusan, ka dib markaad wax soo saarto waxay noqon doontaa mid aad u fiican tayada ugu sareysa. Waxa kale oo la isticmaali karaa marada Polymer. Kalluumeysiga wuxuu bilaabmaa kaddib marka la buuxiyo. Noocyada isla xilligaas si dhakhso ah ayuu u yareeyaa, tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad haysato quudin tayo sare leh.
Tirtiriddu waxay hagaajineysaa waxtarka quudinta iyo waxtarka quudinta, waxayna sidoo kale saameyneysaa qiimaha waxtarka leh ee waxsoosaarka caanaha. Qolalka silage ayaa dukaanka ku kaydi dhaqaal ahaan marka loo eego gacmaha. Dhamaan kharashyada waxay bixiyaan waqtigooda iyadoo ay ugu wacan tahay ilaalin tayo sare leh. Gacmaha, quudinta hadhuudhka, hadhuudhka, dhirbaaxada, qashinka dilka ah, alfalfa iyo kuwa kale ayaa la goostay. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ka mid ah gacmo-gelintaas
Dhibaatooyin nafaqo oo hooseeya sababtoo ah joojinta degdeg ah ee hawo qaadashada hawada.
Wax khasaare ah kuma laha silage ee lakabyada dheeraadka ah iyo daboolka qafka.
Nidaamka wanaagsan ee hubka silage.
Nuujin buuxda ee casiirka qashinka ee taangiga.
Iyadoo la tixgelinayo faa'iidooyinka kor ku xusan, waa ammaan in la yiraahdo silecinta keydka tubooyinka polymer waxaa loo tixgeliyaa qaab wanaagsan oo aan lahayn hawo galeysa quudinta.
Ma taqaanaa? Corn wuxuu ka kooban yahay 26 walxood oo miisaanka wakhtiyadoodu socdo oo aan luminayaan hantida waxtarka leh xataa marka qasacadaysan. Waa hodan ku jirta dufanka dabiiciga ah ee dufanka leh, taas oo ka caawisa kahortaga kansarka, waxay yareysaa heerka kolestaroolka daran, waxay hagaajineysaa shaqada beerka iyo mindhicirrada.
Cilmi-baadhayaasha saynisyahanka waxay muujiyeen in cirbadaha gabbaldayaha ee wejiyada kala duwan ee dhirta ay muujinayaan natiijooyin kala duwan oo ah hababka maarroolojiga. Haddii aad soo ururiso dhirta bilowga ah ee ubax, ka dibna qoyaan badan halsano ee silo qaadataa si deg deg ah ka badan haddii goosashada waxaa lagu fuliyaa wajiga of Bisaylkiisa abuur. Waxaa muhiim ah in la ogaado in fayowgaan geedka this bilowga ubax u horseedaa hoos u ah content sonkorta by 10 jeer, halka luminta protein tan 10%.
In heerka tallaalka abuurka, heerka sonkorta ayaa la yareeyey 5 jeer, lumitaanka protein waa 8%. Qiimaha nafaqada ee cagaarka cagaaran: wajiga ubaxa - 0.23 unugyada quudinta, ee wajiga isbeddelka miraha - 0.25 unugyada quudinta halkii kg.
Silo la dhammaystiray waanu eegi karnaa qaabka isku midka ah. In wajiga ubax iyo wajiga qaangaadhka ah ee miraha, qiimaha nafaqada ee silage waa 15% ka badan, iyo xaddiga protein ee hoos u dhacay 40% 1 qaybta quudinta.
Sidaa darteed waxaan ku talineynaa nadiifinta qorraxdheer si silage ah bilowga ubax. Laakiin ka hor, waxaad u baahan tahay inaad ku beerto gabbaldayaha. Waxaa loo beeray qaab saafi ah ama lagu qaso digirta. Dalagyada hore waxay bixiyaan heer sare oo ah cagaar, sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhammaysato cirridka ka hor inta aan la goynin dalagyada miraha.
Inta lagu jiro goosashada gabbaldayaha, heerka biyaha ee cagaarka waa 80%, qiimaha nafaqada ee 0.13 qaybood oo quudiya iyo 12 g oo borotiinka ah halkii 1 kg. Sidoo kale, dhirta waxaa ku jira 2% sonkorta iyo 87% qoyaanka, ugu yaraanta sonkorta waa qiyaastii 1.6%. Waxa kale oo muhiim ah in la yareeyo qoyaanka ilaa 70%, tanna waxaa lagu sameyn karaa iyadoo lagu darayo 10% oo ah cunto nadiif ah oo si fiican loo quudiyo inta lagu jiro silage. Haddii aad ku darto digirta silo gabbaldayaha, markaa waxaad sameyn kartaa adigoon xaddideyn. Waxa kale oo ay ku fiican tahay hadhuudhka, halka aad ka heli karto cunto tayo sare leh oo la siin karo lo 'iyo doofaarro.
Ma taqaanaa? Marka la eego diiwaanka Guinness Records, ubaxa ugu weyn ee lagu qoro adduunka ayaa ah 82 cm (Canada), waxaana ugu sarreeyaa qorraxdheerta oo uu koray M. Heijimh oo ku yaal Netherlands, dhererkeeduna wuxuu ahaa 7 mitir.
Haddii aad soo daahday nadiifinta dhirta, waxay afkoda u muuqanaysa mid adag, iyo caleemaha qalalan iyo dayrta. Tani waxay keenaysaa in ay sii xumaato tayada iyo tayada quudinta ee gabbaldayaha iyo yaraynaya dhalidda nafaqooyinka halkii cutub. Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho gabbaldayaha sida dalagga ka dib goosashada ka dib, waxaa fiican inaad bilaabaan caleemaha goosashada iyo afkoda bilowga ah ee gaysashada. Caleemaha waxaa ku jira heer sare oo ah borotiinka cufan (ilaa 300 g halkii 1 kg), qadar badan oo biyo ah. Xaaladdan oo kale, quudinta ayaa si liidata loo hubiyay waxaana loo baahan yahay in lagu daro dhaqanka qoyan ee dhaqamada saafiga ah, xayawaanka. Waxay gacan ka geystaan ​​koritaanka degdegga ah ee silage.
Waxaad u baahan doontaa inaad milixda 5 g ee khamiirka qalalan 5 litir oo biyo ah 2 saacadood ka hor isticmaalka. Adiga ayay kudhiibaan.
Weyn waxaa loo isticmaalaa iyada oo ku xiran qoyaanka qoyaanka ee silage. Waxaad u baahan tahay inaad sameysid 30 litir 1 tereed Si aad u hesho silage tayo sare leh laga bilaabo gabbaldayaha, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u dhufto oo afkoda si taxaddar leh iyo tufid sumad silage si fiican. Si loo baabi'iyo luminta casiirka, lakabka jarida cawska (50 cm ee dhumucda) waa in la dhigaa meel hoose ee kaydinta. Cabbirka waa in lagu daboolaa filim kor ku xusan.
Silage Ready ayaa ka kooban:
9.5% wax soo saarka nitrogen-free (BEV).
Waa muhiim! Silo waxay ku madoobaataa hawada, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u dooratid kaydinta.
Hubka masagada ah
Masagada sonkorta leh, oo aan ku talineyno in aan u isticmaalo silo, waxa ku jira heer sare oo sonkor ah waana silage ilaa bislaado badan. Silage ka soo dhirta this ma aha mid ka gooyay hadhuudhkii.
Ka hor inta aanad tuurin silo waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso muddada miraha dufan ee wax lagu karsado. Waqtigan xaadirka, mass massage qashinka masaggada waxaa ku jira heerar sare oo adag, miisaaman biyaha iyo sicirka sare ee qaybaha quudinta.
Maqnaanshaha hadhuudhka waa in la dhajiyo (1: 2), ka dibna waafajiyaa. Jaantuska waxaa lagu dhammeeyaa lakabka qoyan cagaaran oo leh 80-90 cm qaro weyn, ka sarreysa, silo waa in lagu daboolaa filimada iyo dhulka.
Laga soo bilaabo goorta la goynayo, hadhuudhku wuxuu lumiyaa 25% nafaqooyinka, waxaanu kugula talineynaa isticmaalka maaddooyinka wax lagu ilaaliyo, hase yeeshee taasi si buuxda uma baabi'id khasaaraha.
Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo cows ka dib markii la shubo. Shaki la'aan, waxay kuu sahleysaa inaad si weyn u kordhiso khayraadka quudinta, ka tirtirta luminta nafaqooyinka masaggada, hagaajiso dhadhanka, uma baahna isticmaalka maaddooyinka wax lagu ilaaliyo oo lagu daboolo jawiga cimilada.
Waxaan sidoo kale kuugu soo bandhigi karnaa tiknoolajiyada hadhuudhka hadhuudhka ah. Qeybta hoose ee xargaha waxaad u baahan tahay inaad ku jiifiso 100 tan oo caws, tampag iyo lakab dhan ilaa 1 m. Waxaad ku jirtaa masaggada qoyaanka 70%. Kadibna waxaa la wareegay caws engegan 2: 1 lakab. Silo wuxuu ku dhacaa qiyaastii 2 bilood. Waxaa ku jira lignin iyo silica ka badan hadhuudhka.
Ma taqaanaa? Masagada lo'da waxaa lagu koray xayawaan, iyo cowsku waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka waraaqaha, badeecadaha khatarta ah, dayrka iyo saqafyada.
Waxaa suurtogal ah in laga sameeyo silec laga soo bilaabo kufsiga, taas oo ku jiri doonta 6.7 MJ tamarta nuujinta. Dhibaatada kaliya ayaa ah in ay ka kooban tahay walxo aan loo baahnayn oo saameynaya dhadhanka caanaha iyo caafimaadka xayawaanka.
Waxaan u jeednaa wax soo saarista hubka silecsan. Waxaad la kulmi doontaa hal dhib kaliya oo arrintaan ku saabsan - tiro badan oo faddaraysan oo caleenta ah. Waxay keenaysaa samaynta bucooriitir, sidaas darteed, waxaan kugula talineynaa in aad isticmaasho Cofacil Liquid (3 litir oo tone ah oo ah tufaax cusub). Markaad isticmaasho kiimikada kiimikada, qadar badan oo nafaqo ah ayaa la hayaa (90%), silajyada dhamaystiran waxaa loo isticmaali karaa bilowga 2 bilood ka dib markaad gashid.
Hadda waxaan u jeednaa si toos ah farsamada ah qabsashada canola loogu talagalay. Rootiga, oo aad horey u qallajisay, waxaa lagu dhejiyaa khaanad caadi ah oo u fidisa tarpaulin marxaladda koowaad illaa qulqulka qulqulka degayo. Inta lagu jiro maalinta, canolaada dhulka ayaa lumisa wax badan oo casiir ah, taas oo u baahan in la ururiyo lagana tirtiro. Mugga mugdiga silage aad ayuu u yareeyaa, markaa ka dib markaad cabto casiirka waxaad u baahan tahay si taxadar leh u xir.
Sidoo kale, looma ogola in ay kor u qaadaan heerkulka qiyaasta 3 maalmood. Waa inuusan ka badan 40 ° C. Tani waxay keenaysaa hoos u dhigitaanka borotiinka iyo sonkorta silo 30%.
Sababaha ugu weyn ee kororka heerkulka hubka kufsiga ayaa ah mid liidata, heerka sare ee qoyaanka iyo qadar dheer.
Silage-celis waa in la siiyaa xayawaanka, oo lagu daro silo kale (caws, hadhuudh, gabbaldaye). Tani waa in la sameeyaa sababtoo ah silajka kufsigu wuxuu ka kooban yahay xeryahooda suntan, iyo xayawaanka si fudud uma cunaan.
Ma taqaanaa? Laba nooc oo rinjir ah ayaa laga isticmaalaa rapeseed, taas oo loo isticmaalo soo saarista qalinka daabacaadda wargeysyada.
Alfalfa waa mid aad u adag in la tirtiro, laakiin haddii aad si sax ah u sameysid, waxaad siin doontaa xayawaanka leh taajiriin badan oo ah borotiin.
Tiknoolajiyada goosashada Silo waxay ku bilaabantaa ururinta alfalfa. Si fiican u samee inta lagu jiro gaajo. Waqtigaan, alfalfa waxaa ku jira xaddiga ugu badan ee nafaqooyinka, fiber nadiif ah (280 g halkii 1g oo ah xaalad qalalan). Waxa kale oo ku jira lignin badan, iyo dhirta lumiso dheefshiidka si dhakhso ah. Taasi waa sababta alfalfa loo go'aamiyo marxaladda kobaca adigoo dhererka dhererka (40 mm). Waxaad isticmaali kartaa maaddooyinka kiimikada. Waa inay kordhiyaan burburka fibre.
Waxaan u leexannaa sharciyada khasabka ah ee silfinta alfalfa.
Midka koowaad waa in dhirta ay ku jirtaa qiyaasta celceliska qallalan (35-40%). Qodobka labaad - wilting waa 40 saacadood oo aan ka badan.
Suurtogalnimada alfalfa ee loogu talagalay safarka waxaa lagu go'aamiyaa waxyaabaha sonkoraha ee biyaha ku jira. By sugarska waxaan ula jeednaa carbohydrates. Waxay uqalmaan inay halsano. Inta lagu jiro geedi-socodka wejiga, sonkorta waxaa loo bedelaa astaamaha halsano. In ay ilaaliyaan silage.
Waxaan kugula talineynaa in aad soo ururiso alfalfa inta lagu jiro duubista, sababtoo ah waqtigan nafaqada ayaa ah sidan soo socota:
Ash caydha - 120 g / kg.
Cunto adag - 210 g / kg.
Cellulose - 250 g / kg.
Sonkor - 1.0 g / kg.
Qiimaha tamarta waa 5.5 MJ.
Waa heerkulka sarreeya ee buluugga ah iyo borotiinka taasoo ka dhigaysa hannaanka adkaynta alfalfa. Waxaan kugula talineynaa isticmaalka walxaha wax lagu ilaaliyo oo ay ku jiraan bakteeriyada hargabka ee lactic acid, sida Bonsilage Forte.
Marka loo eego isticmaalka maaddooyinka sunta leh, heerkulku wuxuu yareeyaa waxtarka borotiinku wuu xasilan yahay. Alfalfa waa ka fiican tahay in la tirtiro qaybaha kale, tusaale ahaan, hadhuudh, dabocase sonkorta ama masaggada. Tani waxay hagaajin doontaa dhadhanka quudinta, iyo xayawaanku ma geli doonaan sanka daloolka.
Labada qayboodba waa in si fiican loo isku qasan yahay oo si siman loogu dhigaa weel. Waxa kale oo aad ku dari kartaa qalaji (3%). Tani waxay siin doontaa silf alfalfa dhadhan wanaagsan iyo urta.
Ku darista cawska ah alfalfa ayaa yarayn doona qoyaanka iyo hagaajinta hargaha ee silage. Waxaad u baahan tahay inaad isku qasiso 200 kg oo caws oo leh 800 kg oo ah cagaarka alfalfa. Silo ee aad hesho waxay ku jiri doontaa nuska miisaanka qallalan ee caws engegan, taasina waxay yareyneysaa dheefshiidka.
Si loo wanaajiyo hargabka, waxaad isticmaali kartaa tiknoolajiyad kale, sida dhuxusha. Tani waa qudaarta dhirta qasacadaysan. Waxay leedahay hantida asaasiga ah ee silo tayo sare leh, laakiin diyaargarowga dhuxulku way ka duwan tahay taas oo loogu talagalay silagekan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo nadiifin labo-waji ah.
Alfalfa waa in la isku shubo oo ka tagaa duubka jaranjarada. Inta lagu jiro waqtigan, warshadu waa inay yareysaa qoyaanka ilaa 60%. Kadibna cawsku wuxuu ku yaallaa beertu. Taas ka dib, alfalfa waxaa la dhigaa godad iyo ka dib 1-2 bilood.
Xulashada this ee damaanadku leeyahay faa'iidooyin dhowr ah:
Uma baahnid inaad ku darto walxaha xasaasiga ah silo.
Cunto ka mid ah quudinta la qaado ee beerta ayaa hoos loo dhigaa 50%.
Sababtoo ah sii deynta casiirka silageedka iyo sameynta alaabada halsano aan loo baahnayn, luminta nafaqooyinka ayaa la tirtirayaa.
Cunto badan ayaa la keydiyaa.
Marka quudinta xayawaanka ay helaan nafaqooyin dheeraad ah.
Waxaad kaloo u baahan tahay inaad si dhakhso ah u buuxiso silo. Waxay u fiicantahay in tan lagu sameeyo hawo aan qabow lahayn, si aanay u lumin wax xayawaanka ah. Dabool wanaagsan ayaa ka hortagaya helitaanka hawada iyo biyaha. Waxaad isticmaali kartaa filim caag ah, korna waxaad u baahan tahay inaad ku shubto dhulka dabacsan.
Iska ilaalinta qaraha
Haddii aad ka fekereyso wixii kale ee silage laga sameeyo, ka dibna ogow in dalagga qaraha ay sameyn doonaan. Waxaad isticmaali kartaa bocorka, qaraha, geedka ama jinka.
Waxay u baahan yihiin in la googooyo majarafad fiiqan oo ku dar 25% caws. Kadibna isku dar ah waa in lagu dhex marsado qoryo silage ah. Dhigista iyo keydinta qashinka waxaa lagu fuliyaa si la mid ah dhaqamada hore. Weli waxaad ku dhex jiri kartaa godad cufan, laakiin waa inaad ku dartaa 3% cusbo ah. Quudintani waxay ku haboon tahay doofaarka iyo lo'da, laakiin waxaa loo isticmaalaa sidii loo kabo cuntada aasaasiga ah.
Gourds waa in lagu keydiyaa si joogto ah, bilaash ah oo dhaxan iyo meelo khaas ah oo qallalan. Ka dib markaad dhigto midhaha oo dhan si aad u damiso, waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho cawska la jajabiyey.
Ma taqaanaa? Dhab ahaan, bocorka waa berri, iyo mid ka mid ah kuwa ugu weyn dunida. Midabkiisu wuxuu miisaamaa boqolaal kiilogaraam.
Daaradyada baradhada ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin quwad fudud oo suufin leh. Qiimaha Quudinta - 0.2 qaybood oo cunto ah 1 kg iyo 22 g oo borotiin ah. Waxa kaliya ee yareyn kara qiimaha nafaqada ee qashinka ah waa wasakheynta dhulka. Marka la tamping, waxaa si fiican u is dulfuulan oo u dulqaadan kara tayada lumitaanka marka la xiro iyada oo aan qalab qallalan.
Cunno badan oo qallalan ayaa la dhigaa lakabyada hoose, oo ka yarna dusha sare.
Haddii aad weli go'aansato inaad isticmaasho dushooda barafka, si aad u tixgeliso xaqiiqda ah in sonkorta ay hoos u dhacayso.
Dalagyada xididka silageed
Dalagyada rootiga ayaa sidoo kale lagu daraa dalagga silage. Cuntadani waxay ku haboon tahay doofaarka iyo digaagga. Cunto khudradda qudaarta ah waa qalab wanaagsan oo loogu talagalay abuuritaanka burka fitamiin xilliga dayrta.
Waxaad ku tirtiri kartaa baradhada foormo la kariyey ama ceyriin ah oo ku jira godadka ama daboolka. Khudaarta cawsku waa la dhaqaa oo la kariyaa. Ka dibna quudinta waxaa lagu ridayaa godad iyo is dulfuulan. Marar badan oo casiir ah iyo casiir ayaa istaagaya waqtigan. Si aad u ilaaliso casiirka, waxaan kugula talinaynaa inaad lakabiso lakabka hoose ee cawska, xumbada aan xajinaynin, Boorashka khudradda waa in lagu dhajiyo 60 cm oo ka hooseeya darbiyada qulqulka. Xumbadu waxay degtaa 3 maalmood. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad ku baasto bataati yar oo jarjaran oo ka dibna dabool.
Marka la kariyey waxaa lagama maarmaan ah in la dhajiyo digriiga dhaqday oo iyaga oo cajiin. Markaas, iyada oo aan sugin baradho ah si ay u qaboojiso, ku jiifso haraaga, heerka iyo iswada. Waxa kale oo aad ku dari kartaa 10% karootada ama digirta.
Ka dib markii kaydinta si buuxda u buuxsantay, waa in mass waa in si taxadar leh loo daboolay.
Root caleenta khudradda waxaad ku tirtiri kartaa adigoon ku darin caws.
Baaskiilku wuxuu ka kooban yahay: sonkorta - 11.9%, borotiinka - 11.7%, baruurta - 2%, fiber - 10.5%, kalsiyum - 1.3%, fosfooraska - 0.3%, BEV - 52%, carotene - 132 mg.
Ma taqaanaa? Baradhadu waxaa loo tixgelin karaa geedka sunta leh, sababta oo ah berry waa mid aad u sunta ah: bacriminta, waa ku filan inaad cuntid 1-2 qaybood. Si aad u hesho sunta solanine in baradho baradho ah oo ku urursan iftiinka, waxaad u baahan tahay inaad cunto ku saabsan kilo ah oo ah digriiga baradho cagaaran oo aan la dubin.
Grain-bean isku daraa
Waxaad diyaarin kartaa qufac tayo sarre leh oo leh caawimaad wareeg ah. Tani waa dhareer, kaas oo laga diyaariyey miisaanka dalagyada miraha. Goynta waxay bilaabmaysaa inta lagu jiro xilliga duufaannada wax lagu dubo (qoyaan - 60%).
Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo qasacadaha kala duwan ee badarka, tusaale ahaan, shaciir, miro, digir.
Dhirta waxaa ku jira nafaqooyin badan iyo fiber ka yar alfalfa, laakiin silajkan si fudud ayaa dheefshiido.
Ka hor inta aanad bilaabin silage beeraha ama miraha daadinta, waxaa muhiim ah in la caddeeyo faa'iidada tiknoolajiyadaan, taas oo ku saleysan xaqiiqda ah in isku dhafkan kuu ogolaanayo inaad isticmaasho quwada buuxda ee nafleyda ee waxsoosaar dalagga miraha.
Sidoo kale waa faa'iido leh in la diyaariyo weel qoyaan leh adoo isticmaalaya isku darka quudinta oo ah qoyaanka qoyaanka ee isku darka inta lagu jiro ururinta marxaladda Bisaylkiisa waxoogaa waa 63%. Inta lagu jiro koriinka, dhirta waxaa ku jira qadarka ugu wanaagsan ee nafaqooyinka, badan oo istaarijin iyo borotiinka.
Si aad u diyaarisid silageka saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u tirtirto badarka. Tan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanaayo fiilooyinka khalkhalka gaarka ah. Ka dib markii la geliyo habka halsano. Sababtoo ah joojinta degdegga ah ee helitaanka hawada, waxaad naftaada ka ilaalin kartaa luminta nafaqooyinka. Waxaad kaloo isticmaali kartaa "Bitasil". Waa suurtogal in la dalbado hadhuudhka dufanka qaabka quudinta ka dib 4-6 bilood.
Ma taqaanaa? Of the Lix nooc oo firiley ah bamboo - dhirta ugu sareeya, iyo dhammaan dhirta dhulka iyo koritaanka ugu dhakhsaha badan. Guriga ku yaala Koonfurta Aasiya, bamboo waxaa la foorarrada dhererkoodu yahay 50 mitir, cawska, cawska qoyan, oo loo qaybiyay qaybo kala duwan, sida firilayda oo dhan, ilaa 40 sentimitir dhexroor.
Silo isku darka
Quudinta isku dhafan waxa ka mid ah qaybaha sida khudradda cagaaran, taas oo macnaheedu yahay in qoryaha laga sameeyo iyaga oo aan adkaan karin. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa dabacasaha, bocorka, baradhada, xididdo, digirta cagaaran, firiley, qashin khudradeed, cawska la jarjaray, burka iyo maaddooyinka kale. Qaabkani wuxuu bixin doonaa qiimaha nafaqada sare ee silageka, maadaama uu ku jiro sonkor, istaarijin, fiitamiin iyo borotiin.
Intaa waxaa dheer, nafaqooyinka ku jira silo isku dhafan ayaa si fiican loogu kaydiyaa kaydinta. Silo noocan oo kale ah ayaa si wanaagsan loo cunaa xayawaanka sanadka oo dhan, uma baahna diyaarinta dheeraadka ah ka hor inta aanad quudin.
Marka aad xulato qaybaha waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxyaabaha soo socda:
Qiimaha nafaqada ee silage isku dhafan ee 1 kg - 0.25 unugyada quudinta.
1 kg of silage waa in ay ku jiraan ugu yaraan 20 g oo ah borotiinka dheefshiidka iyo 20 mg carotene.
Silo waa inay ahaataa 5% fiber cufan.
Silo tayo leh ayaa ka kooban 1.8% lactic acid iyo ma jirto acid butyric
Feejignaanta cuntada waa inay ahaato in silage ay ka dhigto 50% cuntada guud ee doofaarka.
Si loo helo quudinta isku jirta si loo daboolo shuruudaha wax soo saarka fiber (2%), oo weli si fiican u cunay doofaarka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro dalagga qaraha ilaa 60%.
Waa dalagga qaraha ah ee ka mid ah qaybta qiimaha leh ee silage isku dhafan. Ku daridooda waxay hagaajineysaa dhadhanka.
Xeerarka uuminta silo isku dhafan:
Ka hor inta aan la saarin silage ee xiritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo ilaalinta qoyaanka silage silage. Haddii ay dillaacdo, waxaad lumisaa nafaqooyin badan oo kala duwan.
Baaxada dhulka waa in si buuxda loo farsameeyaa, gaar ahaan derbiyada.
Baahida raashin kala gooni ah waa in lagu qaso oo lagu buuxiyaa weelka silo ee lakabyada.
Dhamaadka qoraalka waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho silo oo leh filim farsamo ama daal.
Xagga sare ee qiiqa waxaad u baahan tahay inaad gabbaad u sameysid si aad uga ilaaliso silajka roobka iyo barafka.
Shimbiraha iyo doofaarka waxaa lagu baraa sida loo quudiyo sida tan tartiib tartiib ah.
Hadda waxaad ogtahay waxa silom yahay, waa kuu fududahay inaad samayso. Raac talooyinka waxaadna heli doontaa cunto nafaqo leh xayawaanka iyo shimbiraha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Baradhada 2019